सग्लो पार्टीको नेतृत्व गर्ने कि टुक्रे पार्टीको ?
पंकज धामी सोमवार, भदौ २, २०७६, २३:१५:०० मा प्रकाशित
सत्तारुढ नेपाल कम्युृनिष्ट पार्टी (नेकपा)को १ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले दुई शीर्ष नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको वरीयता हेरफेर गर्यो । यससँगै खनाल चौथोबाट तेस्रो र नेपाल तेस्रोबाट चौथो वरीयतामा परे । घटुवामा परेको नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ भने, खनालले यो निर्णयलाई सही बताएका छन् ।
पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा दलभित्रको बदलिँदो समिकरणले कस्तो असर गर्छ ? के नेकपामा गुटगत राजनीति हावी हुने संकेत देखिएको हो ? यहि विषयमा पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग जनतापाटीले गरेको कुराकानी:
पार्टी एकताको १५ महिनापछि जिम्मेवारी बाँडफाँड त सकियो । तर वरियतामा गरिएको हेरफेरबाट माधव नेपाल समूह असन्तुष्ट छ । यसले पार्टीभित्रको समिकरणमा असर गदैंन ?
नयाँ पार्टी नयाँ परिवेश क—कसको जिम्मेवारी के हुन्छ ? भन्ने कुराको निक्र्यौल नभएको अवस्थामा विगतमा यसको बहस हुने गरेको थियो । नेताहरुकै बीचमा पनि यो पद र त्यो पद भनेर अनेक खालका कुरा हुने गरेका थिए । यद्यपी यो पार्टी एकीकृत भइसकेको परिस्थितिमा नेताहरुले पदभन्दा कार्यकर्ता र जनताबीचमा आफैं स्थापित हुँदै जानुपर्ने भएकाले यो कुरामा नेतृत्व अल्झेर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तर बामदेव गौतमलाई विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पद दिने निर्णय भएको छ नि ?
उपाध्यक्ष पद विधानामा नभएको कुरा ठीक हो । त्यही भएर सचिवालय बैठकले यो नयाँ पद प्रस्ताव गरेको हो । अब सचिवालयको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटिले निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । स्थायी कमिटिमा लानका लागि अहिले प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसो भएको हुनाले उपाध्यक्ष पद स्थायी कमिटिले स्विकारेपछि मात्र क्रियाशील हुन्छ ।
प्रचण्ड, माधव नेपाल, बामदेव गौतम एक कित्तामा हुँदा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली कमजोर भएको अनुमान थियो । तर एकाएक सबै परिवर्तन कसरी सम्भव भयो ?
यो कुनै नीतिगत विषय होइन् । फेरि बाहिर आएजस्तो को कतातिर भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्ने विषय मात्रै हो । को कतातिर भन्दा पनि सिङ्गो नेकपालाई बलियो बनाउने गरी जिम्मेवारी दिएर मिलाउन सकिन्छ । जिम्मेवारी बाँडफाँटले सकरात्मक नतिजा आउँछ कि नकरात्मक भन्ने हेर्नलाई पर्खनुपर्छ ।
यस्ता चिजमा आलोचना सकेसम्म कम होस् भन्ने कुरामा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सरसर्ति हेर्दा कोही साथीहरुलाई केही कुरामा चित्त नबुझेको मात्रै हो । हिजो विभाग गठनमा पनि यो अवस्था आएको थियो । कुन विभाग कसलाई दिने भन्ने सन्र्दभमा पनि हामी लामो समय अड्केर बस्यौँ । नयाँ पार्टीमा आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने कुरामा प्रत्येक नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले सोच्नु स्वभाविक हो । त्यही सन्दर्भमा नेतृत्व तहमा यो विषय चलेको छ ।
माधवकुमार नेपालले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेरै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसले आन्तरिक समिकरणमा समस्या आउँदैन ?
वास्तममा यस्ता समस्या दुई पार्टी एक भएपछि आउँछन् नै । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको व्यवस्थापन जटिल हुन्छ । जटिल विषयलाई सरल ढंगले कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । कमभन्दा कम विवाद कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । सोचिएन भने पार्टी जीवनमा नै असर गर्छ ।
सचिवायमा वैठकमा नेता नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमात्रै सम्हालेर अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिन प्रस्ताव गर्नुभयो । यसलाई कसरी लिने ?
त्यहाँ के भयो, कसले के प्रस्ताव गर्‍यो ? भन्ने कुरामा हामी बढी ध्यान दिँदैनौ । निर्णय के छ भनेर हेर्छौं । र, पार्टीको निर्णय मानेर अगाडी बढ्छौँ । त्यसकारण त्यहाँभित्र कसले के प्रस्ताव गर्यो कुन विषयमा छलफल भयो, को नेता कतापट्टि फर्केको थियो । कसले के बोल्यो भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैनौ ।
पार्टी वैठकका निर्णयमा कतिपय नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन सक्छ । चित्त नबुझ्न सक्छ । तर निर्णय भइसकेपछि पार्टी एकताका लागि, पार्टी सुदृढिकरणका लागि र पार्टीको भविष्यका लागि त्यसलाई बोकेर जाने हो । यद्यपी असन्तुष्ट नहोस भन्ने कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ ।
नेताहरुले आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने प्रयत्न त राख्दारहेछन् नि, होइन ?
होइन, सबै आफ्नै पक्ष हो । नेतृत्वले सबै आफ्नै पक्ष ठान्यो भने पार्टी बलियो बन्छ । टुक्रा बनाएर हेर्न थाल्यो भने पार्टी कमजोर हुन्छ । यति कुरा शीर्ष नेताहरुले बुझ्ननुपर्ने हो । नेतृत्वले त्यो मात्रै मेरो भाग हो भनेर भन्न थाल्यो भने पार्टी कमजोर हुन्छ । सग्लो पार्टीको नेतृत्व गर्ने कि टुक्रे पार्टीको भन्ने बारे हेक्का राख्नुपर्छ ।